आज भाइटीका, साइत ११ः५५ बजे भए पनि दिनभर टीका लगाउन मिल्ने ! « GDP Nepal
आज भाइटीका, साइत ११ः५५ बजे भए पनि दिनभर टीका लगाउन मिल्ने !
Published On :9November, 2018 7:26 am
विसं २०३५ पछि नियमित रूपमा रानीपोखरीभित्रको बालगोपालेश्वर मन्दिर खुल्न थालेको हो । तीन वर्षअघिको गोरखा भूकम्पले बालगोपालेशवर मन्दिर क्षतिग्रस्त बनेपछि खञ्जनेश्वर महादेव मन्दिरमा पनि दिदीबहिनी एवं दाजुभाइ नहुने भक्तजनको भीड लाग्न थालेको छ । राससबाट